Andian-tsarimihetsika rivotra mahery vaika kokoa
Mini Cool-tantely Air Cooler
Multi Air Expert 4 amin'ny 1
Multi Air Expert 5 amin'ny 1
Multi Tower Air Expert 4 amin'ny 1
Cooler an'ny Young Guy Personal Air
Heater amin'ny fandroana
Heater Sensor amin'ny vatana
Heater momba ny am-patana
Heater miaraka amin'ny Humidifier
Tower miaraka amin'ny Eco Heater
Heater amin'ny efitrano iray manontolo
sambo mandeha amin'ny
Lianchuang Group dia notolorana mari-pahaizana ho orinasa ambony 10 manondrana fitaovana momba ny tontolo iainana momba ny tokantrano
Tamin'ny 23 Desambra 2020, tontosa soa aman-tsara tao Shunde, renivohitry ny kojakojan-tokatrano ao Shina ny vovonana fihaonambe an-tampon'ny faha-8 an'ny Orinasam-pitaovana elektronika ao Shina sy ny lanonam-pamokarana lozisialy Elektronika Elektronika China taona 2020. Miaraka amin'ny lohahevitra "D ...
Lianchuang's Circulate Fan dia nahazo ny "2020 German iF Design Award"
Andro vitsy lasa izay, ny medaly "Aleman'i Design iF Alemanina 2020" dia nalefa tany amin'ilay orinasa nahazo loka - Lianchuang Electric, sampana iray an'ny Lianchuang Technology Group, dia nahazo ity loka ity ihany koa miaraka amin'ny pedestal Air Circulator Fan mitsangana tsy miankina. ..
Canton Fair Global Share —- Ny vondrona Lianchuang Technology Group dia miady indray ao amin'ny Canton Fair ao anaty rahona
Andro vitsy lasa izay, nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny foara faha-128 Import sy Export China (Fair Canton). Voakasiky ny valanaretina manerantany, ny Canton Fair amin'ity taona ity dia mbola manohy ny endrika fampisehoana an-tserasera, mampiseho ny haitao sy ny vokatra sinoa amin'ireo mpampiasa manerantany. Ireo vokatra nasehon'i Lianc ...
Ny Lianchuang Technology Group dia nanao fivoriana niarahana tamin'ny telovolana fahatelo
Ny marainan'ny 13 Oktobra dia nanao fivoriana niarahana tamin'ny telovolana fahatelo an'ny 2020 tao amin'ny Lianchuang Academy ny Vondrona Teknolojia Lianchuang. Ny filohan'ny vondrona Lai Banlai, ny talen'ny vondrona Zhang Yuqi, Chen Ye, Wen Hongjun, ny filoha mpanampy Lai Dingquan ary ireo mpitarika hafa, ary koa ny mpitarika isan-karazany ao amin'ny vondrona ...
Azo ampiasaina amin'ny fanafanana amin'ny ririnina ve ny rivotra mangatsiaka?
Ny rivotra mangatsiaka dia azo ampiasaina amin'ny fanafanana amin'ny ririnina. Ny rivotra mangatsiaka dia mizara ho karazany roa: ny iray dia rivotra iray karazana fampangatsiahana tokana, ary ny iray kosa mangatsiatsiaka sy hafanana misy vokany indroa. Ny teo aloha dia azo atao anaty vata fampangatsiahana ihany, ary ity farany tsy vitan'ny fampangatsiahana ihany fa ny hafanana koa,
Inona no maha samy hafa ny rivotra iainana finday sy ny cooler?
Ny mari-panafody no fitaovana fampiasa matetika amin'ny fahavaratra. Raikitra matetika izy ireo. Mba hahamora azy, misy ny aircon et mobile amin'ny alàlan'ny rivotra, na ny iray amin'ireo dia raikitra. Ka inona ny fahasamihafana misy amin'ny aircon mobile sy ny aircon? 1. Inona ...
Mba hankalazana ny Fetin'ny Fararano-fararano sy hankalazana ny Andro Nasionaly, ny Komitin'ny antoko Lianchuang Science and Technology Park dia nanao hetsika lohahevitra momba ny mofomamy misy lanezy mamy.
Taona iray hafa amin'ny volana fihaonana ary taona iray hafa amin'ny Fetin'ny Fararano-fararano. Amin'ny fotoanan'ny Fetin'ny Fararano-fararano, mba hahafahan'ny tsirairay mahatsapa ny hatsaran'ny kolontsaina nentim-paharazana ary hamorona atmosfera matanjaka, amin'ny harivan'ny 22 septambra, ny Science and Technology Lianchuang Pa ...
Tsingerintaona faha-27 an'i Lianchuang, Fanahy any Shenzhen
Tanàna manana ny toe-tsainy tsy manam-paharoa. Ho an'i Shenzhen, hoy ny olona sasany, “Tsy afaka miverina any amin'ny tanàna niaviany ary tsy afaka miala any Shenzhen koa”. Ny azontsika bebe kokoa momba ity fehezan-teny ity dia mety hoe ivelan'ny Shenzhen, tsy hahita toe-tsaina manaitaitra miavaka sy fahatsapana noforonin'ny atmosfera an-tanàn-dehibe ianao ...
Fampandehanana latabatra famokarana vokatra vaovao DF-HT5385P
Miaraka amin'ny fampandrosoana ny fiaraha-monina sy ny toekarena, mihamaro ny olona miaina tsy miankina, ary miaraka amin'izany ny fanamafisana ny zavatra ilaina isan'andro. Mba hamaliana ny filan'ny tsena dia nanjary nisy ny table heater anay DF-HT5385P. Kely habeny fa angovo lehibe. Voalohany, andao hifantoka amin'ny antsipiriany a ...
Voninahitra sy nofy - 27 taona nitomboan'i Lianchuang
Voninahitra sy nofy - 27 taona nitomboan'i Lianchuang Tamin'ny taona 1993, nivoaka ny radio voalohany marika an'ny Lianchuang Tany amin'ny radio ny hira Nisy feo nivoaka avy tao amin'ny radio tamin'ny misasakalina Tahaka ny naneno tao an-tsofina Tamin'ny taona 1998, ny rivotra voalohany an-trano dia nivoaka ny cooler marika Lianchuang Tamin'ny taona 2000, ny paten voalohany ...
Lianchuang Appliance dia nahazo ny loka Red Dot - ny loka "Oscar" ao amin'ny Design Industry mandritra ny dimy taona misesy
Vao tsy ela akory izay, nambarana ny lisitra mpandresy Alemana Red Dot Award malaza eran-tany. Ny vokatra heater Convection heater izay novolavolain'i Lianchuang Appliance, sampana iray an'ny Lianchuang Technology Group, dia lisitra lisitra avy amin'ny firenena maherin'ny 60 eran'izao tontolo izao, ary nahazo ny "Red Dot Design Conc ...
Nividy mpankafy mivezivezy nefa nanjary mpankafy nentim-paharazana? Mila mahatakatra ireo hevitra ireo ianao!
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-08-22
Tonga ny fahavaratra, ary mihamitombo hatrany hatrany ny habetsahan'ny mpankafy. Amin'ny maha-voalohany eo amin'ny mpankafy azy dia toa tsy misy hafa amin'ny mpankafy herinaratra mitsangana amin'ny tany ny mpankafy ny fivezivezin'ny rivotra, fa amin'ity vidiny ity dia fantatray fa tsy manan-tsahala izy roa. Saingy mbola betsaka ny olona nividy rivotra ...
Ny Shenzhen Lianchuang Technology Group Co., Ltd dia mampiditra ny R&D, ny famokarana, ny varotra ary ny serivisy, mandritra izany fotoana izany dia manaraka ny fanavaozana tena miaraka amin'ny làlan'ny filàn'ny mpanjifa.
Telefaona: + 86-755-84150793